ဂျပန်က အာကာသမှာ အမှိုက်ကောက်မည် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ဗဟုသုတများ > ဂျပန်က အာကာသမှာ အမှိုက်ကောက်မည်
ဂျပန်က အာကာသမှာ အမှိုက်ကောက်မည်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 6:41 AM ဗဟုသုတများ
အာကာသထဲမှာ အမှိုက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုရင် သင်ယုံမလား ? အာကာသမှာ ဂြိုလ်တုအဟောင်းတွေ၊ ဂြိုလ်တုတွေကို အာကာသထဲ ပို့ဆောင်တဲ့ ရော့ကတ်ရဲ့ အပိုင်းအစတွေနဲ့ အာကာသယာဉ်ပျံများမှ လွှင့်ပစ်ပစ္စည်းတွေလို အမှိုက်အပိုင်းအစပေါင်း သန်း ၁၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ပညာရှင်များက တွက်ချက်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီအမှိုက်များဟာ လူတွေ အာကာသမှာ စူးစမ်းလေ့လာမှုများကနေ ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ မျောပါနေကြပါတယ်။ အမှိုက်တွေ များပြားလာတာနဲ့ အမျှ အနာဂတ် အာကာသ စူးစမ်းလေ့လာမှုနဲ့ အာကာသ ခရီးသွားမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှာပါ။
ယခုအခါ ဂျပန်က နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းသို့ အာကာသယာဉ်တစ်စီး ပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ အာကာသယာဉ်မှာ ငါးဖမ်းကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်း တီထွင်ထားတဲ့ အမှိုက်ကောက်မယ့် ပိုက်ကွန်တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။ ပိုက်ကွန်ရဲ့ အစွန်းတစ်ဖက်ကို အာကာသယာဉ်မှာ ချည်နှောင်ထားပြီး အခြားအစွန်းတစ်ဖက်ကို ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ချည်နှောင်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲ လွှတ်ပေးမှာပါ။ ပိုက်ကွန်က ကမ္ဘာ့သံလိုက် ဆွဲငင်အားကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကြောင့် အမှိုက်များဟာ အရှိန်နှေးလာပြီး ကမ္ဘာမြေနဲ့ နီးကပ်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကမ္ဘာ့လေထုထဲ အရှိန်ဖြင့် ကျဆင်းလာပြီး မြေပေါ် သို့မဟုတ် ပင်လယ်ထဲ မရောက်ခင် မီးလောင်ပျက်ဆီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှိုက်ကောက်တဲ့ ပိုက်ကွန်ဟာ မီတာ ၇၀၀ ရှည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုမိုထိရောက်စေဖို့ ပိုက်ကွန်ဟာ ပေ ၅၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀ မီတာ အထိ ရှည်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အင်ဂျင်နီယာ Katsuya Suzuki က ပြောပါတယ်။ ပညာရှင်များက ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အာကာသမှာ အမှိုက်ကင်းစင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဂျပန်က အာကာသမှာ အမှိုက်ကောက်မည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:41 AM Rating:5အာကာသထဲမှာ အမှိုက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုရင် သင်ယုံမလား ? အာကာသမှာ ဂြိုလ်တုအဟောင်းတွေ၊ ဂြိုလ်တုတွေကို အာကာသထဲ ပို့ဆောင်တဲ့ ရော့ကတ်ရဲ့ ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:41 AM